UZuma usexolisile ngolwaseNkandla – LIVE Express
Msizi Zondi | 2 April 2016 | News, Politics |
uMengameli wezwe, u-Jacob Zuma, usexolisile kubantu baseNingizimu Afrika kulandela isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo nethole ukuthi uMengameli akazange ahloniphe futhi waphula umthethosisekelo ngokushaya indiva izincomo zoMvikeli woMphakathi ngodaba lwaseNkandla.
uMvikeli woMphakathi, uThuli Madonsela, wathola ukuthi uMengameli wahlomula ngokungafanele ngenkathi kuqiniswa ezokuphepha emzini wakhe oseNkandla. Lokhu kungenxa yokuthi ezinye zezinto ezenziwa ngemali yabakhokhi bentela kwatholakala ukuthi azihlangene nezokuphepha.
ngoLwesihlanu ebusuku uMengameli ubize izithangami sabezindaba nalapho khona ebekhuluma nesizwe enkulumweni ebisakazwa bukhoma emisakazweni eyehlukene kanye nakumabonakude.
Bese kukuningi ukuqagela mayelana nengqikithi yenkulumo kaZuma ikakhulukazi njengoba abanye bebebheke ngabomvu ukuthi kungenzeka yini ehle esikhundleni njengoba belokhu banda abamunxusa ukuba enze njalo, ikakhulukazi emaqenjini aphikisayo kanjalo nabanye abangamalunga nababengamalunga eqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC).
uMengameli uqale ngokusho ukuthi uyasemukela isinqumo seNkantolo yoMthethosisekelo wathi abantu bakuleli kumele baziqhenye ngomthetho sisekelo wabo kanye nezikhungo eziqinile. “Ngiyasihlonipha isinqumo, futhi ngizosilandela. Sengisho kaningi ukuthi ngizokhokha imali ethize mayelana nokuqiniswa kwezokuphepha eNkandla uma ngabe lokhu sekuveziwe yizinhlaka ezifanele,” kusho uZuma.
“Ngingathanda ukukugcizelela ukuthi bekungesiyona inhloso yami ukuthi ngingazilandeli izincomo engabekelwa zona nguMvikeli woMphakathi, noma ukudelela ihhovisi lakhe,” kuqhuba uZuma.
Uqhube wathi ufisa ukukucacisa ukuthi akakaze ahlele ukuphula umthethosisekelo ekubeni enolwazi noma ngenhloso. Uthi akazange enze ukungathembeki futhi wayengazi ngokungahambi kahle kwezinto okwakwenzeka eMnyangweni wezokuSebenza koMphakathi mayelana nomsebenzi wokuqiniswa kwezokuphepha eNkandla.
uMengameli uthi kwakungesiyona inhloso ukuthi aqhube inkohlakalo noma asebenzise izinsiza zikahulumeni ukuze azizuzise yena noma umndeni wakhe ngokungafanele. Uthi lesi sinqumo sisize kakhulu futhi kunezifundo ezingafundwa yiwo wonke umuntu okuhulumeni.
“Lolu daba seludale okuningi ukukhathazeka kanye nokudideka, engixolisayo ngakho egameni lami kanjalo nasegameni likahulumeni. Nginxusa zonke izinhlaka ukuthi zihloniphe isinqumo futhi zisilandele,” kugoqa uZuma.
Ugxeke ukucwasa nengcindezelo osule esiteshini sezindaba